In ka badan 40 qof oo ku dhimatay dab ka kacay xabsi ku yaalla Indonesia | Star FM
Home Caalamka In ka badan 40 qof oo ku dhimatay dab ka kacay xabsi...
In ka badan 40 qof oo ku dhimatay dab ka kacay xabsi ku yaalla Indonesia
Ugu yaraan 40 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dalka Indonesia ka dib dab aroornimadii hore ee maanta laga soo tabiyay xabsi ku yaalla gobolka Banten.
Wararka ayaa intaasi ku daraya inay dhaawacmeen dhowr qof oo kale.
Haweeney u hadashay waaxda ciidamada asluubta ee dowladda Indonesia laguna magacaabo Rika Aprianti ayaa sheegtay in xaruntaasi ay ku jireen maxaabiis aad u tiro badan.
Waxay sidoo kale sheegtay in hadda ay socdaan baaritaano lagu ogaanaya sababta keentay in saldhigaasi uu gubto.
Mrs. Rika ayaa laga soo xigtay in maxaabiista loo haystay dambiyo la xiriira isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha.
Previous articleWasiirka deegaanka oo baaq u diray waddamada gaaray horumarka dhaqaale
Next articleDHAGEYSO:Dadweynaha Dadaab oo ka hadlay sababta uu u kordhay burburka qoysaska soomaalida
Shir goboleed ka dhacay magaalada Dushanbe ee caasimadda dalka Tajikistan ayaa waxaa uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka India Subrahmanyam Jaishankar uu kula kulmay...